Johani 21 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mashoko Akanaka Akanyorwa naJohani 21:1-25
Jesu anozviratidza kuvadzidzi vake (1-14)
Petro anotaura ataurazve kuti anoda Jesu (15-19)
“Ipa makwai angu madiki zvekudya” (17)
Ramangwana remudzidzi waJesu waanoda chaizvo (20-23)
Mhedziso (24, 25)
21 Pashure peizvi, Jesu akazviratidza zvakare kuvadzidzi vake paGungwa reTibheriyasi. Akazviratidza seizvi. 2 Simoni Petro, naTomasi (ainzi Mumwe Wemapatya),+ naNatanieri+ wekuKana kuGarireya, nevanakomana vaZebhedhi,+ nevamwe vadzidzi vake vaviri, vakanga vari vese. 3 Simoni Petro akati kwavari: “Ndichambonobata hove.” Ivo vakati kwaari: “Handei tese.” Vakaenda, vakakwira muchikepe, asi usiku ihwohwo hapana kana chavakabata.+ 4 Asi pakwakanga kwava kuedza, Jesu akamira pamahombekombe, asi vadzidzi havana kuziva kuti aiva Jesu.+ 5 Jesu akabva ati kwavari: “Vanangu, mune chekudya here?” Vakapindura kuti: “Hatina!” 6 Akati kwavari: “Kandai mambure kudivi rekurudyi rechikepe mubate.” Saka vakaakanda, asi vakazotadza kuadhonzera mukati nekuti akanga azara nehove.+ 7 Mudzidzi uya aidiwa naJesu+ akabva ati kuna Petro: “NdiIshe!” Simoni Petro paakangonzwa kuti akanga ari Ishe, akapfeka* nguo yake yekunze, nekuti akanga asina kupfeka,* akasvetukira mugungwa. 8 Asi vamwe vadzidzi vakauya vari muchikepe, vachidhonza mambure ainge akazara nehove, nekuti vakanga vasiri kure nemahombekombe, pachingova nechinhambwe chemamita angasvika 90.* 9 Pavakasvika pamahombekombe, vakaona paine mazimbe emoto uye pamoto pacho paine hove nechingwa. 10 Jesu akati kwavari: “Unzai dzimwe hove dzamuchangobva kubata.” 11 Saka Simoni Petro akakwira muchikepe, akadhonza achibvisa muchikepe mambure ainge akazara nehove hombe dzaisvika 153. Uye kunyange zvazvo dzainge dzakawanda kudaro, mambure acho haana kubvaruka. 12 Jesu akati kwavari: “Chiuyai mudye.” Hapana kana mudzidzi mumwe chete akashinga kumubvunza kuti: “Ndimi ani?” nekuti vaiziva kuti akanga ari Ishe. 13 Jesu akatora chingwa, akavapa, pamwe nehove dzacho. 14 Aka kakanga kava kechitatu+ Jesu achizviratidza kuvadzidzi pashure pekumutswa kuvakafa. 15 Pavakanga vapedza kudya, Jesu akati kuna Simoni Petro: “Simoni mwanakomana waJohani, unondida here kupfuura idzi?” Akamupindura achiti: “Hongu Ishe, munoziva kuti ndinokudai.” Iye akati kwaari: “Ipa makwayana angu zvekudya.”+ 16 Akatizve kwaari kechipiri: “Simoni mwanakomana waJohani, unondida here?” Akapindura kuti: “Hongu Ishe, munoziva kuti ndinokudai.” Iye akati kwaari: “Fudza makwai angu madiki.”+ 17 Akati kwaari kechitatu: “Simoni mwanakomana waJohani, unondida here?” Petro akanetseka nekuti akanga amubvunza kechitatu kuti: “Unondida here?” Saka akati kwaari: “Ishe, munoziva zvinhu zvese; munoziva kuti ndinokudai.” Jesu akati kwaari: “Ipa makwai angu madiki zvekudya.+ 18 Chokwadi, chokwadi ndinoti kwauri, pawaiva mudiki, waipfeka wega uchifamba uchienda kwawaida. Asi kana wakwegura, uchatambanudza maoko ako uchipfekedzwa nemumwe munhu, okutakura achikuendesa kwausingadi.” 19 Akataura izvi achiratidza kuti aizokudza Mwari nemafiro aaizoita. Paakanga ataura izvi, akati kwaari: “Ramba uchinditevera.”+ 20 Petro akatendeuka, akaona mudzidzi aidiwa naJesu+ achitevera, uya wekumbozendamira pachipfuva chake pakudya kwemanheru achiti: “Ishe, ndiani ari kukutengesai?” 21 Saka paakamuona, Petro akati kuna Jesu: “Ishe, ko murume uyu?” 22 Jesu akati kwaari: “Kana ndichida kuti arambe aripo kusvikira ndauya, zvinei newe? Iwe ramba uchinditevera.” 23 Saka shoko racho rakafamba pakati pehama kuti mudzidzi uyu akanga asingazofi. Asi Jesu haana kumuudza kuti akanga asingazofi. Akati: “Kana ndichida kuti arambe aripo kusvikira ndauya, zvinei newe?” 24 Uyu ndiye mudzidzi+ anopupura pamusoro pezvinhu izvi uye akanyora zvinhu izvi, uye tinoziva kuti uchapupu hwake ndehwechokwadi. 25 Ndingatoti pane zvimwewo zvakawanda zvakaitwa naJesu, zvekuti kudai zvakanyorwa zvese chimwe nechimwe, ndinofunga kuti mabhuku acho aitadza kukwana panyika.+
^ Kana kuti “akasungira.”
^ Kana kuti “kunyatsopfeka.”
^ ChiGir., “angasvika makubhiti 200.” Ona Mashoko Ekuwedzera B14.